Xadgudubka Ka Socda Falastiin Iyo Xaaladihii U Dambeeyey | Xaqiiqonews
Xadgudubka Ka Socda Falastiin Iyo Xaaladihii U Dambeeyey
Xaaladda ayaa aad u kacsan magaalada Qudus oo ka mid ah dhulka ay yahuuddu gumeysto, halkaasi oo ciidanka Yahuuddu ay ka wadaan tacadiyo ka dhan ah shacabka.
Kummanaan shacabka Falastiin ah ah oo isagu soo baxay masjidka Al-aqsa ayaa ku dhaartay in ay difaaci doonaan Al-aqsa, oo Yahuuddu ay ka wado tacadiyo, ka dib markii dadka masjidka ku soo dukada ay ka soo horjeesteen yahuud dhawaan la soo dejiyey xaafad Shiikh Jaraax ee Qudus halkaasi oo laga eryey qoysaskii Falastiiniyiinta ahaa ee daganaa.
Ciidanka gumeysiga Yahuudda ayaa xoog u adeegsanaya dibadbaxayaasha waxa ayna tacadiyo kala duwan kula kacayaan shacabka iyo saxaafadda.
Sawir qaadayaasha Anadol iyo Aljazeera oo ka mid ah warbaahinta ku sugan goobta ee dhacdooyinka soo tabinaya ayaa baahiyey muuqaalada wariyaasha oo la jirdilaayo.
Xiisadahan cusub ayaa soo baxay ka dib markii qoysas falastiiniyiin ah laga barakiciyey xaafad ka mid ah xaafadaha ugu qadiimsan Qudus, arintaasi oo dadka la socda xaaladda Qudus ay ku tilmaameen “sal kicin” madaama hadii qorshahani uu hirgelo ay Qudus gacanta u galeyso Yahuudda.
Qoysaska Yahuudda ayaa ku andacoonaya in ay maxkamadi u xukuntay in ay iyaga dhulka leeyihiin, qoysaska Falastiinna ay yihiin dad ka soo hijrooday Jordan.
Kooxaha Muqaawamada Falastiin oo horay ugu hajnabay in ay tallaabo qaadi doonaan ayaa bilaabay in ay gantaalo ku duqeeyaan xaafado Qudus ka mid ah oo yahuudd ay heysato, arintaasi oo keentay in Qudus ay gasho xaalad kala orod iyo “feejignaan ah”.
Waxaana la soo sheegayaa in Qudus ay ku dhaceen dhowr gantaal oo kooxda Kataa’ib al Qasaam ay ka rideen dhinaca Ghaza.